Akụkọ Mark Packham na Martech Zone |
Edemede site na Mark Packham
Mark Packham sonyeere DigiCert na Julaị 2016 ma na -elekọta atụmatụ ika, onye ndu gen, onye ndu chere, atụmatụ ọdịnaya, mmekọrịta ọha na eze, ahịa dijitalụ na mmekọrịta onye nyocha. Ọ na -eweta ahụmịhe afọ iri abụọ dị ka onye na -ere ahịa na onye njikwa akara ụwa niile, na -ebute mmekorita azụmaahịa zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ dịka Salesforce.com, Microsoft, Verizon, na Abbott.
Chebe akara gị na aha ọma gị na azụmaahịa email ya na asambodo akara akara (VMCs).
Ndị na -ere ahịa email na -aghọta na mkpọsa na -aga nke ọma bụ ihe karịrị nnyefe na izi ozi. Ọ bụ maka ịtụ anya atụmanya na ịkpakọrịta mmekọrịta ha nwere ike ịzụlite ka oge na -aga. Na isi, njikọ mmekọrịta ahụ na-amalite site na aha na ntụkwasị obi na ika ahụ: imirikiti (87%) nke ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ na-ekwu na ha na-atụle aha ụlọ ọrụ mgbe ha na-azụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Kedu otuto na ntụkwasị obi si emetụta Mkpebi azụmaahịa na arụmọrụ ahịa mana ijigide ya